Ngokungafaniyo esimhlophe odumileyo ngakumbi Spanish of Ibiza and Majorca, Platja de la Llosa i elunxwemeni cwaka kunxweme kwidolophu beach encinane Cambrils. Zifezekile iintsapho okanye izibini ezifuna iholide yokuphumla. Playa de la Llosa unemisebenzi zokutyela kunye cafes ezikufutshane, kwakunye yamaHindu kunye loungers ngengqesho, Izindlu zangasese zikawonkewonke, yaye ukungena isitulo.
I-beach kukodwa coves ezincinane ezenziwe ngumntu ezikwenza amaza kunye namaza. Idityaniswe nalawa manzi ayo ecacileyo eluhlaza, oku kwenza ukudada kwaye snorkeling ukuphumla kakhulu.
Isendaweni elidumile Algarve coast, i MEIA Praia yeyona inkulu kummandla Lagos kunye namanxweme likhulu kusetyenziswa koololiwe. Xa kuthelekiswa nezinye, iindawo ezizaliswe ngabakhenkethi zeAlgarve, MEIA Praia a eMeribha-sekhilomitha ezine-elide kwesanti eqaqambileyo zegolide yaye ezolile. Kukwakho ke cafes kunye imigoqo dotted along the coastline. Edge leNtshona Koloni elunxwemeni yi wayesiya ekhula kancinci ngenxa yokuba kufuphi yayo ku Lagos.
A elincane, beach geqe sasendle, ezinobuhle South-Western unxweme France, Beach Senix (nazo ngamanye amaxesha ibizwa Cenitz) ke indawo ephelele Surfers abasaqalayo, iintsapho, okanye abahamba solo. Xa intliziyo Country Basque French, phakathi Biarritz ne Saint-Jean-de-eLuzi, Guethary kuyinto endala ene- town lokuloba.
longtrainjourneys train Travel Travel travelfrance travelportugal indawo yokuhamba